Ngophuhliso oluqhubekayo lobomi bethu beli xesha, ngandlela thile, umgangatho wethu wokuphila uthathile ukuleqa. Oku akupheleli kwimizamo eqhubekayo yabantu base China, kodwa nesiphumo seenzame eziqhubekayo zesayensi yetekhnoloji. Ke ngoko, sinemiqondo eyahlukeneyo yokufuna okuqhubekayo kunye nokusetyenziswa kwezinto ezahlukeneyo Kukho iimbono ezahlukeneyo kunye neengqikelelo zesicelo sezinto ezintle. Kule minyaka idlulileyo, ukuphuculwa kweshishini lase China kukhawuleze kakhulu, okubonelele ngamathuba amahle ophuhliso lwemveliso yokuvelisa eChina.
Ngophuhliso oluqhubayo lwe-e-commerce ye-Intanethi, izise ifuthe elikhulu ekusebenzeni kwabavelisi. Ngaphantsi kwemeko engasemva enjalo, ukuba abavelisi bafuna ukugcina inzuzo yabo yokhuphiswano kushicilelo lwenyathelo ngamanyathelo, kuya kufuneka benze utshintsho kwizinto ezintathu zabasebenzisi, zokuthengisa kunye nolawulo. Kukugcina kuphela isantya kunye nophuhliso lwamaxesha apho kungayi kupheliswa kwintengiso.
1. Guqula imodeli yokuthengisa yesiqhelo
Ukusuka ekuthengiseni iimveliso ukuya ekuthengiseni iinkonzo, intengiso kunye nonyuselo baba yintengiso yenethiwekhi kunye nentengiso yegama-yomlomo. Kwangelo xesha, yatshabalalisa inkqubo yokuthengisa. Kwixa elidlulileyo, intlawulo yayisisiphelo sentengiso, kwaye ngoku sisiqalo sokuthengisa. Kuba ukubuyisa umva akusathethi nje ukuthengiswa kwemveliso, kodwa unolwazi lomthengi, kuya kufuneka ulandelele olu lwazi kwaye uqhubeke nokukhulisa izixhobo.
2. Iikhonsepthi zolawulo lobugcisa
Kwixesha elidlulileyo, imisebenzi emikhulu, ukuba nje iodolo inokufezekisa iindleko eziphantsi kunye nesivuno esiphezulu, kodwa ayikwazi ukugcina abathengi ngonaphakade. Ngoku lixesha lokuphuhliswa kwe-Intanethi apho amaxabiso abonakala ngokucacileyo, ekhokelela kwiindleko eziphezulu kunye neenzuzo eziphantsi, kunye nosizi lwabavelisi, olukhokelela ekufeni kwezinto ezingezizo ezintsha, kunye nokoyika ukwenziwa kwezinto ezintsha. Imeko yangaphandle ejongene nabavelisi bezinto zokugcina imitya yehose iya isiba nzima ngakumbi, kwaye nobunzima bokusebenza buyanda. Eli xesha linzima libeka iimfuno eziphezulu zokuthengisa. Usebenzisa njani iimfuno zenguqu kulawulo kunye nokuphuculwa kwentengiso, kudityaniswa neendlela zolawulo zabavelisi, abavelisi beeshampu yepeyinti kufuneka babeke umxholo we-Intanethi, baqalise isicwangciso “sokunciphisa iindleko zokusebenza”, kunye nokwakha inkqubo “yohlalutyo olukhulu,” ukuze Ukufikelela kulungelelwaniso ngokukhawuleza kwimeko 3. Isicwangciso esiliqili sixhaswa ngakumbi.
Abaphathi baya kukhokela ngakumbi kwaye banciphise umngcipheko ngokukuko.